Ungasithumela kanjani isikrini se-smartphone kukhompyutha | Izindaba zamagajethi
Ungasithumela kanjani isikrini se-smartphone kwikhompyutha
U-Ignacio Sala | | AmaSelula, Amakhompyutha, Tablets
Uma kukhulunywa ngokudla okuqukethwe ku-Smartphone noma kwiThebhulethi yakho, impela ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa uke wacabanga ukuthi kungakuhle ukukujabulela esikrinini esikhulu segumbi lakho lokuphumula, ukuze ukujabulele okuqukethwe kakhulu isikrini esikhudlwana futhi ukwazi ukwazisa yonke imininingwane. Ukujabulela okuqukethwe kusikrini segumbi lethu lokuphumula noma esikrinini sethu sekhompyutha kuyinqubo engasiphoqa ukuba senze utshalomali oluncane. Njengamanje emakethe sinezinketho eziningana esingakwazi ukuzenza khombisa okuqukethwe kwe-Smartphone noma iThebhulethi yakho esikrinini esikhudlwana, kungaba ngokusebenzisa isoftware, amadivayisi noma ukusebenzisa imisebenzi ye-DLNA esinikezwa yi-Smart TVs.
Njengamanje emakethe singasebenzisa i-AirPlay, i-Google Cast neMiracast ukuze sikwazi ukuthumela isikrini sedivayisi kwikhompyutha yethu, umenzi wesoftware ngamunye ukhethe ubuchwepheshe obusivumela ukuthi nathi senze okufanayo, kodwa ngamagama ahlukile .
1 Yabelana ngesikrini sakho se-iPhone noma i-iPad ku-Mac
1.2 Kugqame 2
2 Yabelana ngesikrini se-iPhone noma se-iPad ku-Windows PC
2.2 Kugqame 2
3 Yabelana ngesikrini se-Android Smartphone noma iThebhulethi ku-Mac
3.1 Ukusakaza kwesikrini
3.4 I-Ashot - Isikrini se-Android ne-Screen Capture
3.5 Kugqame 2
4 Yabelana ngesikrini se-Android Smartphone noma iThebhulethi ku-Windows PC
4.1 Ukusakaza kwesikrini
4.3 I-Ashot - Isikrini se-Android ne-Screen Capture
4.4 Kugqame 2
Yabelana ngesikrini sakho se-iPhone noma i-iPad ku-Mac
I-AirServer isivumela ukuthi sithumele okuqukethwe kwe-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch device yethu kwi-Mac yethu.Kudinga i-MacOS 10.8 noma kamuva ukuthi isebenze futhi Iyahambisana nesizukulwane sesi-2 se-iPad 4, i-iPhone 5s noma i-iPod touch, ngaphezu kwanoma iyiphi idivayisi ephethwe yi-Android, Windows 7 PC, Linux kanye nama-Chromebook. I-AirServer ibiza ngentengo ema-euro angu-13,99. Ukuze sikwazi ukuthumela okuqukethwe kusuka ku-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu kufanele singene ku-Control Center kuphela, sislayida umunwe wethu ukusuka phansi kuye phezulu bese ukhetha igama ledivayisi lapho sifake khona uhlelo lokusebenza.
Enye indlela enezinketho ezimbalwa ku-AirServer yi-Reflector 2, uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu esingathumela ngalo okuqukethwe kwe-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch yethu kwi-Mac noma i-Windows PC yethu, ngoba iyi-multiplatform. I-Reflector 2 ibiza u- $ 14,99, ibiza kancane kunembangi yayo enkulu, kepha lkuzinga elisinikeza lona kanye nokusebenza kwalo Kusiphoqa ukuthi sikufake kulolu hlu lwezinhlelo zokusebenza ukuze sikwazi ukwabelana ngesikrini sedivayisi yethu ye-iOS kwi-Mac.
Landa kugqame 2
Kodwa Azikho yini izicelo zamahhala zokwabelana ngesikrini sedivayisi yethu ye-iOS neMac? Yebo ikhona, kepha kunzima ukuthola ukuthi ngabe yini esiyifunayo ngempela ikhwalithi, i-5KPlayer uhlelo lwethu lokusebenza. I-5KPlayer ayigcini nje ngokusivumela ukuthi siguqule idivayisi yethu ibe yisamukeli se-AirPlay, kodwa futhi iyisidlali sevidiyo esihambisana nawo wonke amafomethi atholakala emakethe, afana kakhulu neVLC.
Yabelana ngesikrini se-iPhone noma se-iPad ku-Windows PC
Uma ufuna uhlelo oluhambisana nazo zonke izinhlelo zokwabelana ngesikrini sedivayisi, i-AirServer wuhlelo lwakho lokusebenza, ngoba luhambisana nazo zonke izinhlelo ezisebenzayo, zombili iselula nedeskithophu, ngakho-ke iba ithuluzi elihle lokukhombisa okuqukethwe zedivayisi yethu kukhompyutha bese urekhoda isikrini noma sijabulele okuqukethwe esingeke sabelane ngakho nekhompyutha. I-AirServer ibiza ngentengo ema-euro angu-13,99 nakuzo zonke izinhlelo zokusebenza ezisivumela ukuthi senze lo msebenzi, kunconywa kakhulu kunakho konke, hhayi kuphela ikhwalithi elisinikeza yona kodwa futhi nemiphumela emihle kakhulu nokuhambisana namadivayisi.
I-Reflector 2 ingenye yezindlela esingazithola emakethe futhi ebingasukuma i-AirServer ukube bekungengenxa yokuthi ayisiniki ukufana okufanayo. Lapho sesithengile uhlelo lokusebenza, kubiza u- $ 14,99, noma siyilandile ukuze siyizame mahhala, kufanele nje sitshele umunwe wethu ukusuka ezansi ukuya phezulu ukuze sibonise i-Control Center bese sikhetha igama ledivayisi esifuna ukwaba ngalo isikrini, kungaba ngokuliphinda noma ukulithumela konke okuqukethwe kukhompyutha.
Naphezu kokuba isicelo samahhala, i-5KPlayer isinikeza okunye imiphumela emihle kakhulu lapho sibonisa okuqukethwe kwebheji lethu le-iOS kwi-Windows PC. Ngaphezu kwalokho, njengoba ngishilo ngenhla, i-5KPlayer futhi iyisidlali esihle kakhulu esingakwazi ukukhiqiza noma yiliphi ifayela levidiyo kukhompyutha yethu. Ukuphela kwento engingayithandi ngohlelo lokusebenza, ukubeka iphuzu elibi kuso ukuze ungacabangi ukuthi ngikhokhelwa ukukhuluma kahle ngalo, yisithonjana sohlelo lokusebenza, isithonjana esivela kuzo zonke izinto ezihambisanayo amafayela. Isithonjana sinikeza umuzwa wohlelo oludala nolungasekelwa, sisebenzisa i-skeumorphism eseyaziwa kakhulu kungxenyekazi ye-iOS selokhu yethulwa.
Yabelana ngesikrini se-Android Smartphone noma iThebhulethi ku-Mac
Lolu hlelo lokusebenza lwe-Android lusivumela yabelana ngakho konke okuqukethwe okuboniswa esikrinini se-smartphone yethu ngqo cishe kunoma isiphi isiphequluli sewebhu, ngakho-ke ngeke siphoqeleke ukufaka noma yiluphi uhlelo lokusebenza kwi-Mac yethu. Esizokuphuthelwa uma sisebenzisa lolu hlelo lokusebenza lwamahhala ukuthi umsindo awudluliswa, isithombe kuphela kanye nokulahla okukhona ngezikhathi ezithile. Lapho sesivule uhlelo lokusebenza, i-Screen Stream izosinikeza i-URL evela kunethiwekhi yethu, i-URL okuzofanele siyifake kusiphequluli sethu.
Ukusakaza kwesikrini nge-HTTP
Umthuthukisi: UDmitriy Krivoruchko
Njengeningi lalezi zinhlobo zezicelo, i-AirDroid yakhelwe ukuthi ikwazi ukwabelana ngokuqukethwe okuboniswa esikrinini sedivayisi yethu ye-Android kukhompyutha ukuze thatha izithombe-skrini noma urekhode amavidiyo. Ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza, inqubo yenziwa kusetshenziswa uxhumano lwe-Wi-Fi, ngakho-ke yomibili ikhompyutha okukhulunywa ngayo nedivayisi kufanele ixhunywe kunethiwekhi efanayo.
I-AirDroid: ukufinyelela namafayela
Njengoba sengivele ngiphawulile ngenhla, lolu hlelo lokusebenza lwe-multiplatform lusivumela ukuthi sabelane ngokuqukethwe kwanoma iyiphi idivayisi kwi-Mac noma i-PC, umsuka wayo kuyidivayisi ye-Android, iOS, Windows, Mac ... ukuthola kwabanye ngakho-ke ama-euro angu-13,99 abiza izindleko afaneleke ngokuphelele. Umthuthukisi we-AirServer uyasivumela zama uhlelo lokusebenza mahhala izinsuku ezingu-7, ngemuva kwalokho kuzofanele ukuthi sithole ilayisense uma sifuna ukuqhubeka siyisebenzise.
Lapho sesifake uhlelo lokusebenza ku-Mac yethu, kufanele siye kudivayisi yethu ye-Android futhi faka uhlelo lokusebenza le-Google Cast, uhlelo lokusebenza oluzosivumela ukuthi sithumele konke okuqukethwe okukhonjiswa kudivayisi yethu esikrinini esikhulu se-PC yethu. Lolu hlelo lokusebenza lusayinwe yi-Google futhi luyatholakala ukulanda mahhala ngokuphelele.
I-Chromecast eyakhelwe ngaphakathi
I-Ashot - Isikrini se-Android ne-Screen Capture
Uma sikhuluma ngezinhlelo zokusebenza zamahhala ukuze sikwazi ukwabelana ngesikrini se-Smartphone noma iThebhulethi yethu kwi-Mac, i-Ashot ingenye yazo, ngoba ngumthombo ovulekile. Isikrini se-Android ne-Screen Capture sisivumela ukuthi silingise isikrini sedivayisi yethu ye-Android kwi-Mac, nakwi-PC ene-Windows noma i-Linux. Ukuze senze lokhu kufanele nje sifake uhlelo lokusebenza bese sixhuma idivayisi sisebenzisa ikhebula le-USB elihambelanayo.
Landa i-Android Screenshot ne-Screen Capture
Kepha uma lokhu esikufunayo kuyikhwalithi hhayi nje yokwabelana ngokuboniswa esikrinini sedivayisi yethu ye-Android, kepha futhi sifuna ukurekhoda konke okwenzekayo kuso, i-Reflector 2 uhlelo olufanele lwalezi zidingo. I-Reflector 2 uhlelo lokusebenza olunentengo engu- $ 14,99, kepha singalusebenzisa izinsuku ezimbalwa ukuze sihlole ukuthi luvumelana yini nezidingo zethu ngaphambi kokuqhubeka ukuluthenga. I-Reflector 2 iguqula iMac yethu ibe umamukeli sengathi iyiChromecast noma i-Apple TV, kepha kulokhu kufanele siqale sisebenzise uhlelo lweGoogle Cast, uhlelo Kuzoba nesibopho sokuthumela konke okuboniswa esikrinini sedivayisi yethu ku-Mac yethu.
Yabelana ngesikrini se-Android Smartphone noma iThebhulethi ku-Windows PC
Uma ufuna uhlelo oludlulisa isithombe kuphela hhayi ividiyo kwikhompyutha yethu futhi lukhululekile, lolu uhlelo lwakho lokusebenza. I-Screen Stream uhlelo oluyisisekelo olusebenza nganoma yisiphi isiphequluli esisebenzisana ne-MJPEG njenge-Chrome, Safari, Edge, Firefox) ukuze ukudluliswa izonikela ngama-lags, ngokuya ngohlelo esilusebenzisayo, kuzocasula kancane noma kancane.
Phakathi kwezicelo ezikhokhelwayo ezisivumela ukuthi siguqule i-Windows PC yethu ibe ngumamukeli ukuze sibonise isikrini sedivayisi yethu, i-AirServer ivelele ngaphezu kwe-Reflector, ngenxa yenani elikhulu lamadivayisi eliwasekelayo. Kusukela, uma sikhuluma ngekhwalithi, isivinini nokusebenza, zombili i-Reflector 2 ne-AirServer zisebenza njengenteleziNgingaze ngilinge ukusho ukuthi i-Reflector iyashesha ngandlela thile uma kukhulunywa ngokuqala ukubonisa okuqukethwe. I-AirServer iyatholakala ukulanda mahhala, isivumela ukuthi sihlole insiza izinsuku eziyi-7, ngemuva kwalokho kufanele siye ekuphumeni bese sikhokha ama-euro ayi-13,99 okubizayo.
Ukuze sibonise okuqukethwe yi-Android Smartphone noma iThebhulethi yethu nge-AirServer kufanele sivakashele i-Google Play Isitolo futhi landa uhlelo lokusebenza le-Google Cast, ukuze sikwazi ukuthumela konke okuqukethwe okukhonjiswa kudivayisi yethu kwiWindows PC yethu.
I-Ashot ibuye ihambisane ne-ecosystem yeMicrosoft, ngaphezu kweLinux ne-macOS, okuyenza ibe ngelinye lamathuluzi anconyelwa kakhulu ukwaba isikrini samadivayisi ethu kukhompyutha yethu. Futhi, ngokuba ngumthombo ovulekile, iyatholakala mahhala ngesixhumanisi engisishiya ngezansi.
Lolu hlelo lokusebenza lungenye yezinto ezinhle kakhulu esingazithola emakethe uma sifuna thumela isithombe kusuka kudivayisi yethu ye-Android ku-Windows PC yethu. I-Reflector 2 inentengo ngo- $ 14,99 futhi isivumela ukuthi sithumele okuqukethwe okukhonjiswa esikrinini sedivayisi yethu kwi-Windows PC yethu ngesinqumo esifanayo naleso esisinikezwa yidivayisi, inqobo nje uma i-monitor iyahambisana. Ukuze sikwazi ukusebenzisa i-Reflector, kufanele sifake kudivayisi yethu uhlelo lokusebenza le-Google Cast, kusuka kubafana baseMountain View, uhlelo lokusebenza oluzobona iWindows PC yethu, sibonga i-Reflector 2, ukuthumela isikrini ku-PC yethu futhi sikwazi ukujabulela imidlalo noma ama-movie kusikrini esikhudlwana.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Amakhompyutha » Ungasithumela kanjani isikrini se-smartphone kwikhompyutha
Noe lynn kusho
Siyabonga ngokwabelana ngalezi zinhlelo zokusebenza zisetshenziswa ngokugcwele. Usekela? I-VLC iye kwiChromecast
Phendula uNoe Lynn
UTim Cook: Amahemuhemu e-iPhone 8 alimaze ukuthengiswa kwemodeli yamanje
I-Youtube isivele inemodi emnyama nezinketho eziningi zokwenza ngokwezifiso ziyatholakala